UMoya, iTotem, kunye naMandla eziLwanyana | Iintsingiselo zezilwanyana zoMoya kunye neMpawu - Izilwanyana Zamandla Omoya
Umoya, Amandla, kunye neTotem Izilwanyana Symbolism kunye neentsingiselo
Umfanekiso ovela kwindawo yethu yodade WhatIsMySpiritAnimal.com
Umoya, Amandla, kunye nezilwanyana zeTotem
Uphawu kunye neentsingiselo
Kwindawo yethu yodade WhatIsMySpiritAnimal.com Unokufunda isimboli kunye neentsingiselo zamakhulu oMoya, iTotem, kunye naMandla eziZilwanyana. Apha ngezantsi uyakufumana intsingiselo yeZilwanyana zoMoya kwezinye zezona zikhokelo zomoya wezilwanyana. Apho unokufunda Ungawufumana njani umoya wakho wezilwanyana kwaye uthathe ezichanekileyo Uvavanyo lwezilwanyana zoMoya !
Thwala izilwanyana zezilwanyana
Ngaba imifanekiso yeBhele ibonakalise iphindaphinda ebomini bakho? Esi sisilwanyana esinamandla soMoya esiza nomyalezo obalulekileyo. Kuwo wonke umhlaba Bear uphawu kunye neentsingiselo zokuqina kwinkalipho kunye namandla ebusweni bobunzima. Ibhere ikugcina usemgangathweni kwaye ikunika impilo emzimbeni, engqondweni nasemoyeni.
NjengoMoya Animal Bear ubonelela ngobunkokeli. Xa kufuneka uthabathe inyathelo kwaye uzive ungalungiselelwanga Bear energy iyakuxhasa kulomceli mngeni. Tsalela umnxeba kwiBhere yomqolo kunye nokuqokelela. Kubantu abangena kubuzali, iyeza lebhere libonelela ngokhuseleko olomeleleyo losapho kunye nomoya oqinisekileyo okhusela abantwana bakho.
Abantu abazalwe benetot ye-Bear banokwesaba kwendalo kunye nomxholo oqinileyo wokuzithemba. Abantu bebhere banamandla amakhulu kunye nomoya wemfihlakalo. Bathetha phandle malunga neenjongo, kwaye banomdla wokuthobela imithetho kunye nokuhlonipha imida. Musa ukuwela umgca ngeBhele. Banobuqili, kwaye aboyiki ukuya emfazweni.
Amasiko amaninzi ayimfihlakalo, ngakumbi amaShamanism, adibanisa iBhere ngamandla omlingo. Mhlawumbi yiloo nto abantu bakudala babenqula iBhere Spirit, beyithemba njengomkhuseli kunye nehlakani ngexesha lemfazwe. Iinkolelo zamaGrike namaRoma zibopha uBher noothixokazi uDiana noArtemis bobabini bezele ukuzala.
Ukuba ubuphantsi kwemozulu, iBhele ikukhumbuza ukuba amandla okuphilisa alala kuwe. Kuya kufuneka ubuye umva kwaye uxhase impilo yakho. Sebenzisa amandla akho ngobulumko, uvumele iBhere ikhokele indlela. Kungalixesha lokulala kwindawo yentuthuzelo 'yomqolomba' wakho kunye nokuhlaziya umthombo wakho wangaphakathi. Umbono wokufuna kuya kuba ngumzamo ofanelekileyo kunye neBhele njengomncedisi.
Ngamaxesha esidingo Bear Animal Spirit ubuyisela isibindi ukuze ukwazi ukujongana nemiceli mngeni kwaye ume phantsi. Phila ngenyaniso yakho yasemoyeni nakwiziphi na izinto ezizayo. Ibhere sisidalwa esizimeleyo, ke kuya kufuneka usebenze le khosi uwedwa ukuze uphumelele. Camngca, zenzele uze umamele umyalezo kaBhele.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Thwala izilwanyana zezilwanyana .
Isilwanyana somoya seBeverver
Into yokuqala engena ezingqondweni zabaninzi xa becinga ngentsingiselo kunye nophawu lweBeaver Spirit kukuba ulinenekazi elixakeke kakhulu. Kwilizwe loMoya wezilwanyana bambalwa amanye amandla asebenza ngokuzingisa okukhulu okanye ngobuchule kuneBeverver. Xa iBeverver ingena ebomini bakho, usenokuba uphumile emsebenzini kwaye ulapho ukuze aqinisekise ukuba ubuyela kwitrakthi, wenze isiseko esikhuselekileyo, kwaye uqhubeke de ugqibe ngempumelelo.
Umyalezo weBeverver awungomsebenzi nje ongapheliyo, nangona kunjalo. Ngapha koko, umoya weBeverver uninzi kakhulu uluvo lokuba ukudlala kubalulekile. Emva kokudibana nenjongo, ixesha layo lokubhiyozela, iba sisidenge, ivuse umntwana wethu ongaphakathi- ukhululwe. Chwetheza ubu-A bobuntu phaya, yazi-ukuhamba neBeverver kukukhupha e-ofisini uye kwindawo yokudlala yobomi.
Abantu abadityaniswe ngamandla e-Beaver banolwalamano olomeleleyo loluntu kunye nolwakhiwo losapho olusondeleyo. Bawakha amadama abo ngendlela yokuba bakhusele abo babathandayo emanzini aphithizelayo obomi. Bakhusela ngokukhethekileyo abantwana babo. I-Beaver idada emqolo ithwele amantshontsho ayo kwisisu sayo ngelixa ihamba imisinga ngokukhuselekileyo.
I-Beaver yenza isilwanyana soMoya xa sifuna ukuhlaziya ubomi bethu. Lixesha lokuba sithathe into esiyifunayo ngenene, kwaye siqale inkqubo yokubonakalisa ukukhumbula. Ukunyamezela yinto elungileyo, njengokuba nomonde. Gcina intloko kunye nentliziyo yakho ibhalansi kwaye iliso lakho likwiinjongo. Ekugqibeleni umlingo okhutheleyo we-Beaver uya kukujonga
Iyeza leBeverver likwagxininisa ukusebenzisana okuxhasayo. Isangqa sakho sangaphakathi, isizwe sakho kufuneka sisebenze kunye nothando njengesikhokelo sokubona amaphupha akho ezaliseka. Yilungele ukubeka i-sweat equity equity ebomini bakho. Uya kuvuzwa ngovuyo, uthando kunye nokuhleka.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Isilwanyana somoya seBeverver .
IBuffalo Spirit Animal
UMoya oyiNyathi omkhulu nongcwele mhlawumbi uxabiseke kakhulu phakathi kwezizwe zaseMelika zaseMelika apho uphawu lwayo oluphambili kunye nentsingiselo kukutyeba. Izizwe zakuqala zazithemba iBuffalo kwizinto ezininzi zobomi ukusuka kwimpahla kunye nezixhobo ukuya ekutyeni nakwindawo yokuhlala. Ukuba uBuffalo wanyamalala, kwakuthathwa njengemimoya eyoyikisayo enokuveza intsingiselo yesizwe.
Endle, iBuffalo ifuna indawo. Baneempuphu ezijikelezayo, kwaye abanangxaki ngokwaphula imiqobo endleleni yabo. Ke ngoko xa uBuffalo Animal Animal eza kuwe lixesha lokuba uzibuze malunga neziphi izithintelo ozifumene. Ixesha lokolula imilenze yakho kwaye uzikhulule. Iminxeba yenkululeko.
Abo bazalwe nge totem yeBuffalo bahlala bechaphazela imeko yabo ngandlela thile. Bakhankanya ngomzekeliso iprarie, ehambisa izityalo kunye nembewu kwaye ivuse umhlaba. Oku kuzisa ukukhula okunotyebileyo kungekuphela kweNyathi kodwa kubantu kunye neemeko ahlangabezana nazo.
I-Buffalo Animal Spirit sisidalwa somhlambi. Abathandi ukuhamba bodwa. Omnye wemiyalezo yeBuffalo kukuba akufuneki uhlale wedwa. Ngapha koko, kukho ukhuseleko olukhulu kwinkampani yabo bakuqondayo. Ngaphakathi kwimeko yeqela zama ukufumana amandla wentsebenziswano kunye nokuthatha inxaxheba ngokuhloniphanayo.
Isilwanyana somoya seBuffalo sibonelela ngobuninzi. Isenokuba zizipho ezizayo, ukonyuselwa emsebenzini, okanye isenzo somusa somntu ongamaziyo. Umbono wokuba 'uyihlawule phambili' ngokuqinisekileyo ukwindlu yendlu kaBuffalo. Xa uyiphila inyani yakho, unokuma umhlaba wakho ngaphandle kwengxabano kwaye utsala iintsikelelo. Isilumkiso kuphela kukuba uBuffalo unokuba nguBull ngentloko malunga nombono wabo. Irhamncwa elinobunzima obumalunga neepawundi ezingama-2 000 linokuba yinto eyoyikekayo xa lizimbela izithende.
Okokugqibela, uBuffalo njengesilwanyana somoya usifundisa ixabiso lombulelo, umthandazo kunye nokusebenza kwengqondo. Ukubulela kusasaza intabalala kunye novuyo. Hamba ngendlela engcwele ngozuko.
Inkamela yoMoya wezilwanyana
Kwiindawo zakudala eziyimfihlakalo zoMbindi Mpuma, kwaye phantse naphina apho amanzi anokuthi anqabise intsingiselo kunye nophawu lweCamel Spirit ehambelana nentshukumo-ngokukodwa ukuhamba umgama omde. Abarhwebi kunye nabaphambukeli ngokufanayo basebenzise iiNkamela ukuthwala iimpahla zabo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye kunye namabali, iintsomi kunye nomlingo.
Isilwanyana soMoya weNkamela siza kuthi ngamaxesha apho kufuneka sinyamezele iimeko ezinzima. Xa abantu benomsebenzi onzima, ogcwele umngcipheko phambi kwabo, inkamela sisikhokelo esisifunayo. Inkamela izibophelela kwikhosi kwaye igcina kuyo ngokuthembeka. Esi sikhokelo sinethemba kumngxunya waso ngohlobo lwamanzi ahlaziyayo ukusinceda siqhubeke.
Abo bazalwe ngeCamel Totem kunqabile ukuba babonise uloyiko okanye ukungaqiniseki. Banceda abantu abajamelene nemiceli mngeni engaphaya kwamandla abo. Ukuba unomhlobo okanye umntu omthandayo ohamba neCamel-bakulolwalamano ixesha elide okanye nantoni na. Abantu beenkamela ngelixa banelisekile, kodwa bayazibophelela kwizizathu abazibona zilungile.
Inkamela sisilwanyana esinamandla esikhethekileyo esinokusitsalela umnxeba xa siziva sisesichengeni, sidiniwe kwaye sikulungele ukuncama. Amayeza enkamela ahlaziya inqanaba lamandla akho kunye neengcebiso zibukele isantya sakho kwindlela engaphambili. Ayizizo zonke izinto elugqatsweni. Iingcebiso ngeenkamela: ukuzilawula.
Ngokwembali, inkamela yayiyenye yeendlela zokuqala zothutho. Ngenxa yesi sidalwa sezizwe zinokudibana kunye, kwaye abantu banokuhambisa kwiindawo ezingcono xa zabo bezingakwazi kuhlala. Inkamela iseke urhwebo, izisa imimangaliso evela kwihlabathi liphela kwiindawo ezintsha. Yibophe ngokudibeneyo kwaye iCamel ikwamele unxibelelwano, imisebenzi, ukwanda, ingqondo yehlabathi, uluntu kunye nokuvala umsantsa phakathi kwabantu beenkcubeko ezahlukeneyo. Inkamela yeyokuma emhlabeni njengoko iinqanawa zazihamba elwandle.
Ukuba uCamel wayenayo imantra kunokuba kunjalo: Iglasi izele sisiqingatha, kodwa inokuhlala ibuyiselwe erimini ngexesha kunye nomzamo olungileyo.
Inja yoMoya wezilwanyana
Intsingiselo kunye nesimboli yoMoya oyiNja yoMoya wezilwanyana unxibelelene ngokukodwa noluntu. Izinja zafunyanwa naphi na apho abantu bahlala khona, kwaye yayisisidalwa sokuqala esasamkelayo kwi-Hearth njengeqabane. Ngenxa yoko, ayothusi into yokuba i-Dog Totems, iZikhokelo kunye nezilwanyana zamandla zonke zineempawu ezifanayo, mhlawumbi ezona zinamandla kukunyaniseka.
UMoya weZinja usisilwanyana esipakishe kakhulu - sibotshelelwe emntwini, kusapho okanye kwiqela elinokuqonda okungapheliyo nothando- yiyo ke le ilebheli 'oyena mhlobo usenyongweni womntu.' Bangabakhuseli abanobukrakra bohlanga abathwele iimfihlelo zokomoya abazifundileyo ngalo lonke ixesha labo nabantu.
Xa inja njengesiLwanyana soMoya iqala ukubonakala ebomini bakho, jonga isimilo sayo. Ngamanye amaxesha esi sikhokelo sikaMoya siyadlala kwaye sisikhumbuza ukuba sithathe ixesha 'lokuphumla'. Ngamanye amaxesha i-Dog Power Animal inokuza njengeyunithi yenkxaso kwabo bazinikezela kakhulu (njengabahlengikazi nabanye ababoneleli).
Inja inomdla wokuva kunye nevumba. Nika ingqalelo ukuba lo Moya Wezilwanyana ukukwazisa. Uya kuhlala efumana ivumba lengxaki ngaphambi kokuba wazi nayiphi na ingxaki. Unokuyithemba inja ukuba ingakhokeli. Ngenja njengomncedisi oyimfihlakalo, unokufumana izipho zakho zengqondo zikhula zisomelela. Inja ikufundisa ukuba uthembe abo bodwa ukuze ufumane indlela eya kukhuseleko.
Umyalezo weNja ikwayenye yeenkonzo-lulwimi oluyinyani lothando. Izinja zinika abo banxibelelana nabo ngaphandle kwemeko. Inja yomoya inokukukhuthaza ukuba wenze loo nto-thanda kwaye uxolele, usebenze kwaye uqonde. Phulaphula ngenyameko.
Xa usebenza neNja njengeMfuyo yakho yamandla khumbula ukuhlonipha ubuhle bala mandla. Sukuyisebenzisa. Sebenza ngobubele entliziyweni yakho, kwaye inja iya kuqhubeka ihlala ecaleni kwakho.
Ndwendwela indawo yethu kadadewethu, WhatIsMySpiritAnimal.com kwaye ufunde ngakumbi malunga Inja yoMoya wezilwanyana .
Inamba njengesiLwanyana saMandla, iTotem okanye isiLwanyana soMoya siza nomgqumo omkhulu kumaphiko aso. Iinkcubeko ezahlukeneyo zithi uphawu kunye nentsingiselo kwiNyoka, kodwa iMpuma Ekude ikude ngenzondelelo ifake lo mfanekiso kubugcisa, ubugcisa bezinto zakudala, umculo, kunye noFeng Shui (ukubala nje ezimbalwa). Iingcali ze-Feng Shui zincomela imifanekiso ye-Dragon kwishishini ukuzisa amandla aqinisekileyo, anenzuzo, kunye nomoya we-Dragon uyafana. Ukongeza umyalezo kaDragoni ngowamandla, isibindi, kunye nokuncamathela kuyo. Igongqongqo liphila ixesha elide-umonde nobulumko zizinto ezintle ezibuthandayo.
Isikhokelo seNyoka yinkosi yazo zonke izinto, umlingo kunye nokutshintsha kwemilo. Usenokuba ukulumkisa ukuba uphuma ngaphandle kwebhalansi okanye ufuna ukutshintsha ubunyani bakho kwinto ekhethekileyo ngokwenene. Yamkele iDragoni yakho yangaphakathi xa uqala kwilinge elitsha lokomoya okanye eliyimfihlakalo lokuqonda okungakumbi. Khumbula ukuba inyoka ibhabha izulu. Yimbono eninzi leyo ukuba uyenze, kodwa xa ubona umbono wonke - ukucaca kuyakhanya.
Iidragons ngokwendalo zithatha ingcinga yomntu ngenxa yokuntsonkotha kwazo. Akukho nto ilula ngamayeza e-Dragon, kwaye ngamanye amaxesha izinto azikho njengoko zibonakala. Kule Dragon ngamanye amaxesha inokuba yinto encinci ye-prankster, kodwa ayikhe ibekho ngaphandle kwesifundo esiqhotyoshelweyo. Ungumkhuseli okhohlakeleyo kwabo abelana nabo ngokuqonda kwakhe.
Iindidi ezahlukeneyo zendlu yemimoya yedrako yamandla ahlukeneyo. Igongqongqo lomlilo alchemical. Amaphiko e-Dragon yomoya kunye nokhuthazo kunye nonxibelelwano olunzulu kwithuku. Igongqongqo loMhlaba libonelela ngolwazelelo kunye nomhlaba ovela kubuchule bakho. Okokugqibela, Inqanawa yaManzi ikunxibelelanisa kwakhona neemvakalelo zakho kunye neemvakalelo eziyinyani.
Kwisayithi yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, unokufunda ngakumbi malunga Dragon Spirit Animal .
Isilwanyana soMoya weHashe
Xa i-Horse Spirit Animal igxadazela ebomini bakho ibotshelelwe ngumyalezo wenkululeko, inkuthazo kunye nokuhamba ngokungafaniyo nantoni na owakhe wayifumana ngaphambili. Isimboli kunye nentsingiselo yehashe lidibanisa ngokuthe ngqo kumandla kunye nokuthanda kwesi sidalwa. Ihashe likhetha ukuba ndlongondlongo - lihamba ngaphandle komda, ke xa umphefumlo wakho ukulungele ukuqhekeka kwaye ubaleke njengomoya - ungamangaliswa kukufumana isiKhokelo seMfuyo yamaHashe esikukhokela.
Ihashe limela ubudoda okanye amandla kaThixo oMhlaba, kubandakanya amandla ezesondo. Ihashe liziva yonke into ngokunzulu, kwaye linokuqhuba ukubeka amandla kunye namandla ekusebenzeni. Isilwanyana soMoya weHashe sisipho esikhulu xa ufuna ipush yokuqhubeka nezinto kwaye ufumane ulonwabo. Vumela iHashe litsibe ngaphezulu kwemida ebonakalayo ebomini bakho, livule indlela eya kwiinjongo zakho, ngakumbi ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo.
Abantu abaphinda baphinde basebenzise amayeza amahashe bathanda ukuveza izimvo zabo kwaye babonakala ngathi abanakuphelelwa ngamandla. Ukuba nentlalontle ligama lomdlalo-abantu bakugcwalisa ngee-vibes ezinkulu ezikuzalisa iinzwane zakho. Isilumkiso kuphela esinamandla wehashe ngamanye amaxesha kufuneka silawule-kuya kufuneka uhlale uyinkosi yesiphelo sakho kunokuba iimeko ziqhuba isenzo kunye nokuphendula kwakho. UMoya weHashe ekugqibeleni uyinyani ngobuhlobo malunga nobudlelwane, umbono woyilo kunye neenkanuko - hlala uyinyani kuwe.
Ihashe lukhetho oluhle kwiZilwanyana eziMandla ukuba usebenza kwintetho yesini okanye kwimicimbi. Phantse kuyo yonke indawo emhlabeni Iintsingiselo zamahashe zibandakanya inkanuko kunye nokuziphatha. Ihashe likunceda ukuba wamkele ezo mvakalelo ngaphandle kokuziva uneentloni, endaweni yoko ukungonwabi luvuyo.
Xa usebenza ngombane wehashe umbala wehashe unokuchaphazela esona sicelo. Ihashe elimhlophe lithetha ngokuhlanjululwa. Umhlophe ngumbala wokomoya ofanelekileyo ekukhuleni kokomlingo okanye ukuqonda kwengqondo. Ngokuthelekisa, iBlack Horse Totem ikunceda ukuba usebenze kwisithunzi ngokwakho - ezo zinto ngamanye amaxesha ungaziqapheliyo.
Funda ngakumbi malunga Isilwanyana soMoya weHashe .
yenza i-gemini kunye ne-capricorn
Inkawu uMoya wezilwanyana
Monkey uyabona, Monkey do? Akunjalo xa ubandakanya isilwanyana somoya senkawu. Isimboli kunye nentsingiselo emva kweNkawu inento yokwenza nolwakhiwo lwentlalo kunye nobuntu. Inkawu uMoya uyadlala kwaye uhlakaniphile. Esi silwanyana saMandla sinomdla wokufunda naso, kwaye azinangxaki yokunyusa ukukhusela abancinci beqela labo. Ke isixelela ntoni oku xa iNkawu itshintshela ebomini bethu.
Akukho mbuzo wokuba iMonkey Monkey Animal isikhumbuza ukuba sivuse umntwana wethu wangaphakathi kwaye sivumele ukuba ukuhleka kwakhona. Ubomi bunokuba ngumsebenzi onzima, kodwa ukuhleka ngokwenene kukutya komphefumlo okuhle. Ubukhaphukhaphu beMfene buthelekiswa namandla ayo angaguqukiyo. Inkawu inamandla kwaye inokuba ngumhlaseli xa ifuneka, kodwa oko kunjalo ekuphenduleni kwingozi ebonakalayo.
Izikhokelo zomoya wenkawu zisibonisa ubulumko bokudlala kunye noluntu. Zizilwanyana zentlalo ezinamathele kakhulu ngaphakathi kweyunithi, ngakumbi usapho lwazo. Umyalezo wenkawu kukuba ubomi bakho abusisiqithi. Sifuna uluntu kwaye ukufumana indawo yethu kunye nenjongo kweli qela kubaluleke kakhulu. Inkawu iphendula kulwakhiwo lwentlalo, ukuhlangana kunye nembeko kuzo zombini. Ingcamango yokungahoyi uMdala okanye ezinye iindawo zeqela ayamkelekanga.
Abasebenzi bokuKhanya babona iMfene njengendlalifa kwaye ngandlela ithile iprankster. Le ndlela yokuziphatha inentliziyo entle kwaye yenzelwe ukonwaba konke. Isilumkiso ngamandla eNkawu kukuba ayizizo zonke iindlela zobuqhetseba eziqondwa ngabo bonke. Inkawu njengesiKhokelo soMoya inyathela xa kufuneka ubuchule endaweni yokwenza ihlaya ngaphandle kokucinga. Ngaphandle kwale nto kukho isilumkiso kwiMonkey energy ukuba ingahambi ishukuma-ukuzola kubalulekile ekusombululeni ingxaki. Inkawu egqobayo indlebe inokufumana ingqalelo, kodwa kunqabile ukuba luhlobo olufunayo.
taurus umfazi kunye nomhlaza indoda ebhedini
Okokugqibela xa inkawu iqhubeka ibonakala inxibelelene nomntu okanye imeko, kunokuba yinto yokuba ubuqhophololo bukhona. Ukuba kukho into ebonakala intle kakhulu ukuba ingayinyani, inokuba kunjalo.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Inkawu uMoya wezilwanyana .
Mouse Umoya Wezilwanyana
Isilwanyana soMoya weMouse siza ngokukhawuleza ebomini bakho ngokuthula nangokuzimela. Olu phawu lwesilwanyana esinamandla kunye nentsingiselo ichaza obu buqhetseba. Kwimvelo, iMouse incinci kwaye isengozini kakhulu. Yiyo loo nto, amaxesha eempuku ukuzingela kwabo ukutya kunye nentshukumo ngononophelo olukhulu, besebenzisa ubuchule bokukhokela indlela yabo.
Imouse njengesikhokelo somoya wesilwanyana sithwala umyalezo ofanayo kuthi-yazi, mamela ilizwi lakho elingaphakathi kunye nokuzithemba okuphezulu, kwaye ulumkise kwaye uthule ube ngamahlakani akho.
Esinye sezona zizathu zixhaphakileyo zeMpuku ezindlebeni zethu kuxa kukho irhamncwa esinokuthi singalazi (kuhlala sinemvakalelo). Izinto zinokubonakala ngathi zikhuselekile, kodwa kukho into okanye umntu ofuna ukuba uyiqwalasele ngokupheleleyo kwaye uyihlolisise. Fumana umngxunya ofanelekileyo wokufihla kwaye uzicule kuzo zonke izivamvo zakho ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye.
Abantu abaneMouse njengeTotem yezilwanyana banobudlelwane obomeleleyo kummandla womoya. Baxhomekeke kakhulu kwimiyalezo evela kwi-Higher Self kunye ne-Universe yokugcina ukhuseleko lomntu. Ihlabathi ligcwele ubungozi beMouse, kwaye loo miyalezo iyamomeleza kwizilingo neembandezelo. Ukuqonda okuvela kwiMouse kuhlala kumangalisa - zichanekile ngendlela eyoyikisayo, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokungonwabi. Nangona kunjalo xa umntu weMpuku ethetha inyani yabo - uya kuba wenza kakuhle ukumamela.
Iyeza lemouse kunye nomlingo lixhomekeke kwizixhobo ezincinci njengendawo ekugxilwe kuyo. Amakristali amandla amancinci, izinto ezikhazimlayo, ubucwebe, amulets njl. Wonke umsebenzi. Imouse yamandla ixhobisa ezi ngezipho zokujonga, ixesha elifanelekileyo kunye nokuqina okuqinisekileyo kwengqondo. Imouse kaMoya ikwangumbane oGqwesileyo waMandla ngamaxesha apho ufuna ukhuseleko, ukhuseleko okanye intuthuzelo.
Ekugqibeleni uphawu lweMouse lubopha ngokusondeleyo ngokusinda kwemihla ngemihla. Yonke intshukumo iMouse iyenza, yonke into ithatha umdla kuyo-kwanezona zinto zincinci- zonke zinentsingiselo, kwaye zonke zinempembelelo kumgangatho wobomi. Imouse inengqondo yokubala 'ukubheja' kwelona khondo lilungileyo lezenzo ezikhawulezayo zokuba uphile kwaye wonwabe.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Imouse kunye neSilwanyana soMoya .
Isilwanyana somoya se-Owl
Isimboli kunye nentsingiselo ye-Owl iqala kwindalo nakwintsomi. Phandle endle iSikhova sibhabha sithe cwaka kwaye sinombono onomdla ebusuku. Njengesilwanyana somoya oku kuguqulela kwi-Owl kusinika ukuqonda okukhulu kwiimfihlakalo kunye nokukwazi ukuwela iimeko ezinzima ngaphandle kwesaziso esikhulu. Ngaloo mizuzu xa ufuna ukuba 'ungabonakali' umoya we-Owl uba ngumncedisi.
Kwintsomi yamaGrike isilwanyana esingcwele sika-Athena sisikhova. Amabali akhe apeyinta uAthena njengoThixokazi wobulumko, ukuchuma, ubukrelekrele kunye nokufunda. I-Owl ithwala onke amandla kumaphiko ayo. Tsalela umnxeba kwi-Owl njengesilwanyana esinamandla xa ufuna ubuchule kunye nokubona ngaphaya kwenyani yomphezulu. I-Owl iba sisikhokelo se-Shamanic kwabo banqwenela ukuphonononga umlingo ngokunzulu.
Isilwanyana soMoya we-Owl ngumthunywa wenyaniso. Ayizukukhohliswa. Xa usebenza ngamayeza e-Owl kubaluleke kakhulu ukuhlala uthembekile kuwe nakwabanye. Ukongeza, zilungiselele utshintsho olunamandla okanye utshintsho ngelixa i-Owl isesebomini bakho. Umnyango uyavalwa, kodwa omnye uza kuwutshintsha ngokukhawuleza.
Abo bane totems zabo banokuqonda okungaziwayo kwaye bathathe izigqibo ezilungileyo ngenxa yoko. Isikhova sihlala sijonga entliziyweni yezinto, hayi nje into abanye abanqwenela ukuyibonisa ngaphandle. Ubuchule bemvelo bunjenge-radar yomphefumlo. Njengoko umntu enokuthelekelela, abantu be-Owl ngokwenene 'zizikhova zasebusuku' abafumana amandla kunye nobuchule bokugqabhuka emva kokuhlwa.
Njenge-Owl hoots kuwe qaphela ukuba lixesha lokushiya ngasemva ezo zinto zingasakuchazi. Ukulahla abantu abanetyhefu kunye neemeko kwaye ubaleke kwimimoya yenguqu. Bona ngokucacileyo ngamehlo ka-Owl kwaye wamkele izinto ezinokwenzeka kunye nezinto ezinokubakho.
Ekugqibeleni u-Owl umele ubulumko bee-Ancestors. Mamela ngokusondeleyo kwizifundo zaKhe njengoko zivela kwelemimoya, kwaye ungaphoswa ngumhlobo okanye ilungu losapho elinethemba lokukukhokela.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Isilwanyana somoya se-Owl .
Inkunzi yenkomo okanye isilwanyana somoya
Xa ujonge kwisimboli se-Ox kunye nentsingiselo njengesilwanyana somoya, into enye eza ngokukhawuleza engqondweni ngamandla ayo obhedu. Ayothusi into yokuba amaqela ezemidlalo, izizwe zakudala kunye nabaphathi basebenzise i-Ox ukumela amandla kunye nokufaneleka kwabo. Iinkolo ezahlukeneyo zazinqula umoya we-Ox, ngelixa abanye besiva esi sidalwa sixabiseke kakhulu kangangokuba saba sisipho esifanelekileyo soThixo.
Xa isilwanyana somoya se-Ox silima kubomi bethu kunqabile ukuba kuthule okanye kude kude. I-Ox sisilwanyana esinamandla esine-UMPH eluhlaza! Iimpawu eziqhelekileyo zokomelela ezinxulunyaniswa ne-Ox zibandakanya amandla, ubugqwetha, igunya, ukubonelela kunye nobutyebi (oh, kunye nentwana yethamsanqa lomlinganiso olungileyo). Abasebenzi bokuKhanya bakholelwa ukuba i-Ox ingena ebomini bethu ukuzisa ukuchuma kolunye uhlobo. Oku kunokuba ngumntwana wokoqobo okanye 'umntwana wengqondo' -kodwa nangayiphi na indlela into eza kukhula.
Njengesilwanyana sasefama esibalulekileyo, umoya we-Ox unonxibelelwano olusondeleyo emhlabeni kunye neendlela zokulima. KwiMpuma Ekude, i-Ox imele intwasahlobo kunye nohlaziyo ke cinga ukubeka uphawu lwe-Ox kwigadi yakho ukuze ikhule ngokuvelisa. Biza umnxeba kwi-Ox Power Animal ngelixa uhlwayela izityalo zakho zemilingo. Sebenzisa nasiphi na isivuno esiphumela kwimilingo okanye kumasiko okuba serendipity kunye namandla omzimba.
Ukuba unayo i-Ox Totem ebomini bakho ungatyhala phantse kuyo nantoni na. Ukuzimisela kwakho kunokutsala abanye kunye nawe ukuya kwiinjongo ezifanayo xa bexinekile. Hlala uyazi ukuba unenkani, nangona kunjalo, njengoko unokuba nentloko-yenkomo ngamanye amaxesha.
Abo bazalwe ngonyaka wamaTshayina wokusebenza nzima kwe-Ox ixesha elide kuyo yonke into ukusuka kwimisebenzi ukuya kubudlelwane. Aba bantu banqwenela okuqhelekileyo kunye nokukhululeka - isiphithiphithi asamkelekanga. Umxholo ophambili kwaba bantu ngumsebenzi onzima kunye nokuziphatha kuzo zonke iinkalo zobomi babo, ezihlala zikhokelela kwimpumelelo ngokuzimisela okukhulu.
Njengoko usebenza ngamayeza e-Ox umonde kunye nokholo ngabahlobo bakho. I-Ox iyanyamezela kude kube kugqityiwe injongo. Sebenzisa amandla akho ngobulumko kwaye uzame ukugcina ukuthobeka. I-Ox, ngelixa isilwanyana esikhulu, sisikhokelo somoya esilula, kwaye siphantsi komhlaba.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Inkunzi yenkomo kunye neOx yezilwanyana .
I-Panda Bear yezilwanyana zoMoya
IPanda njengesilwanyana somoya isinika uphawu kunye nentsingiselo enkulu. Ngelixa lihle kwaye linoboya ngaphandle, iPanda ngokwenyani inamandla kakhulu iTotem kunye nePower Animal emele ukomelela kunye namandla. Xa iPanda ingena ebomini bethu sifunda malunga nokomelela kwangaphakathi kubunzulu bomphefumlo wethu. Iyeza lePanda libuye lisidibanise nobomi bethu beemvakalelo, ngakumbi amandla okuseta imida kunye nokuzikhulisa thina kunye nabanye.
Ukuba iPanda ibinemantra enye ibiya kuba: Ibhalansi kuzo zonke izinto. Kubo bonke ubomi iimeko ezahlukeneyo zenza kube lula ukuphuma kwi-kilter. Ubungakanani bePanda busibuyisela emva kwiziko. Ubume obuphindwe kathathu bobomi bethu - umzimba, ingqondo kunye nomoya - abunakuze bujongwe nePanda njengesiLwanyana esinamandla. Ukongeza iPanda ifundisa ngokudibanisa imiba eyahlukeneyo yeetalente zethu kunye nobuntu kwiyunithi yokusebenza epheleleyo. Abasebenzi bokuKhanya basixelele ukuba iPanda ithwele ithamsanqa elisincedayo sibone icala eliqaqambileyo lobomi.
Abantu abazalwe benetanda yePanda Bear banobuthathaka ngokweemvakalelo. Bacinga nzulu kwaye bajonge imeko yabo. Le meko inomdla kakhulu ithetha ukuba iPanda inokufuna ukubuyela kwindawo ethe cwaka apho banokuthi baphinde banxibelelane ne-Higher Self kunye ne-Divine. Umyalezo kaPanda uhlala, ungoyiki ukuthatha ixesha lakho. Kukho indawo apho ungaphupha khona kwaye ube. Sukuyiyeka loo nto, eneneni uyonwabele kwaye uvule onke amandla anokubonakaliswa nguPanda.
Imida esempilweni iyimfuneko kubomi obunempilo. Njengesidalwa esihlala sodwa, ubulumko bePanda buyayamkela le nyaniso. Kufuneka uzive ukhululekile kulusu lwakho, nakwindawo ohlala kuyo. IPanda ihlala ikonwabela intuthuzelo yezinto eziphathekayo apho ikhulisa khona abantu obathandayo. Cinga ngale nto njengengxaki ye-Panda-ishushu, ithambile kwaye iyamkela. Nantsi iPanda yakho yoMoya Wezilwanyana ivuselela amandla azinzileyo kunye noxolo obukade unalo lonke ixesha.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga I-Panda Bear yezilwanyana zoMoya .
Izilwanyana eziMnyama eziMnyama
Yintoni uphawu kunye nentsingiselo yeZilwanyana eziMnyama eziMnyama eziMnyama? Esi silwanyana sikhokelayo sinamandla omeleleyo obufazi asibeka ekunxibelelaneni nomntu wethu onzulu, oyinyani. Xa uhamba no-Panther unokulindela iimvakalelo ezinamandla, imbeko kunye nesibindi sokungena emphefumlweni wakho.
Umbala omnyama wePanther unika esi silwanyana amandla uphawu olongezelelekileyo lokufa. I-Panther inokusinceda siyiqonde ngokwenyani inguquko eyimfihlakalo ekufeni, kodwa ikwasikhumbuza ukuba ukuzalwa kwakhona kuyinxalenye yevili lobomi. Oku kufa kunokuba ngumfuziselo - utshintsho olukhulu emsebenzini, kubudlelwane, kwindawo yokuhlala njl njl, kodwa konke akuphelanga. Lindela ivili ukuba ijike kwaye ubone apho iPanther ikuthatha khona.
Abantu abane-Black Panther njenge-Totem bahlala benolwazi olunzulu kunye nobugcisa obukhulu bobugcisa. Njengoko behamba ebomini, uthando kunye neminqweno iqhuba amava amatsha kunye nethemba. Abantu bePanda bamkela amandla abo kunye namaphupha abo kwaye bafuna ukuwafeza ngokupheleleyo.
Iyeza lePanda lidala, kwaye ligcwele ulwazelelo olukhethekileyo. Ukusebenza nale magic kusikhuthaza ukuba sijonge uloyiko lwethu kwaye sijongane nazo ngqo. IPanda sisilwanyana esinegunya elinamandla kuloo miphefumlo ikhetha indlela yomoya yodwa nayo. Esi sikhokelo sezilwanyana asikukhathalelanga ukuba wedwa, okanye ukuhamba nabanye abanengqondo efanayo.
Njengoko uMoya wePherher usifundisa, ukuthanda kwethu kufumana umlilo kunye neetalente zethu ziyavela. Lixesha lokuba uphinde ufune indawo yakho kunye namandla kwaye uyeke amanxeba amadala aphole. I-Panther yam ikufundisa ubugcisa bokuHamba nge-Astral, okanye ikuncede wandise amandla akho obuchwephesha. Ngoku kunakuqala lixesha lokuzithemba - mamela la mathumbu ethuku. Vumela i-Panther yakho yangaphakathi ikhokele ukhetho lwakho, ngakumbi olo lwesini okanye inkanuko yenyama. I-Panther ikhuthaza ukuphononongwa kunye novuyo kwimizimba yethu esihlala siziphika.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Izilwanyana eziMnyama eziMnyama .
Penguin Umoya Wezilwanyana
I-Penguin Spirit ihlala inxibe kwaye ilungele ukuya phambili. Akumangalisi ke ukuba uphawu kunye nentsingiselo yePenguin inento yokwenza nenkqubela phambili. Ngelixa ilizwe lakho linokuziva ngathi usiya ngaphandle kolawulo kumkhenkce, uPenguin uyakubona kwisiphithiphithi de ekugqibeleni ubone iphupha okanye injongo ibonakalisiwe.
Iyeza lephengwini limalunga nokuziqhelanisa. Lo Moya wezilwanyana usixelela ukuba sihlale sizolile, sipholile kwaye siqokelele kwaye singaxineki. Kwindalo uPenguin usebenzisa amanzi kunye nomhlaba, onika esi silwanyana amandla uphawu olongezelelekileyo lokulinganisa phakathi kwento eqhelekileyo kunye nomlingo, phakathi kwengcinga kunye ne-intuition. Kulungile ukuba ube namehlo akho kwiinkwenkwezi ngokude unyawo olunye emhlabeni.
Abo banePenguin Totem bafumanisa ukuba ngabadlali beqela lokwenyani. Aba bantu bahlala bebonakala ngathi bayayazi into abayifunayo kunye nendlela yokuyifumana ngamandla okucheba, nokuba kuthatha ixesha. Kwindawo zentlalo abantu basePenguin benza oonozakuzaku abagqwesileyo ngenxa yokuba bebambelele ngokuqinileyo kwimigaqo yokuziphatha.
Cinga ngokusebenza noPenguin njengezilwanyana eziMandla xa ujonge ukuzithiba nokuzithemba okukhulu. Kulabo banqwenela ukufunda ubugcisa be-Astral Projection okanye uLucid Dreaming, iPenguin Spirit yenza isikhokelo esingacacanga de ube uzimele.
Xa becinga ngePenguin, abantu bahlala belibala ukuba esi sidalwa yintaka engenakubhabha. Endaweni yokuba nesongezelelo esingenamsebenzi, oonombombiya basebenzisa amaphiko abo ngokudada endaweni yoko. Kule ndlela yokujika kwendalo, umoya wePenguin umele ubhetyebhetye kunye notshintsho. Bakwizidalwa ezihlala kakhulu ezinezakhono zonxibelelwano ezinomdla.
Xa uPenguin Power Animal edada nawe ukulungele ukuphakama, phuma uze nesipho sakho se-gab! UPenguin Spirit ukuxabisile ukuchitha ixesha nosapho olusondeleyo kunye nabahlobo. Musa ukumangaliswa ukuba olo nxibelelwano kunye nokunxibelelana kubhekiswe kumalungu eTribe yakho.
Ihagu yoMoya wezilwanyana
Intsingiselo kunye nomfuziselo woMoya wehagu unzima. Kwelinye icala, sihlala sibona ihagu njengomthombo wesondlo. Olu nxu lumano lwaqatshelwa yimpucuko yamandulo kubandakanya amaCelt, amaYiputa kunye namaTshayina. Ukongeza ezi nkcubeko zinxulumana nehagu nokuchuma - kokubini kukulinganisa kunye nokwenyama. Ngapha koko, uninzi loothixokazi abangoomama babenehagu yabasetyhini njengomfuziselo okanye isidalwa esingcwele.
KwiMpuma Ekude nase-Yurophu i-Pig Animal Spirit izisa ithamsanqa, ihlala iluhlobo lwemali. Mhlawumbi yiloo nto iibhanki zehagu zihlala ziyindlela eyonwabisayo, ebekekileyo yokugcina imali. Isilumkiso kuphela ngamayeza ehagu kukuba, ukuba asetyenziswa gwenxa, abanye abantu bazifumanisa bezifica ngokugqithisileyo, nto leyo ekhokelela ekuziphatheni okubi ngokwesini, ukuchitha imali kunye nobuvila.
Abantu abazalwe ngePig Totem ngokwendalo baninzi kwaye kunokwenzeka ukuba babe nabantwana abaninzi. Banethamsanqa ngethamsanqa ngemali, kwaye nohlobo lokuphakama komama. Abantu beehagu bahlala begcwalisa amakhaya abo kwaye ngamandla 'bondla' abantu ngobushushu kunye nokuqonda okuqinisekileyo.
Kwi-Zodiac yaseTshayina, iBoar / ihagu imele ukusukela kwinjongo. Ihagu ihloniphekile, inyanisekile kwaye iqinile ngendlela engathethekiyo. Phakathi kwamaGrike kunye namaMelika aseMelika ihagu inolwalamano olomeleleyo nendalo kunye nokulima. Amandla ehagu axhasa isivuno esisempilweni, nesinintabalala. Ngokwamaxesha anamhlanje, ukusebenza nehagu njengezilwanyana ezinamandla kunceda ekubonakaliseni nasekugqibeni. AmaJapan abona inkalipho kunye nesidima kulo Moya Wezilwanyana.
Ihagu yasendle (okanye iNgulube) sisilwanyana esisebenza ngelanga kunye nesandi esomeleleyo sobudoda. Inkqubo yobukroti kunye nobubele kwimithambo yayo. Amagorha kwiinkcubeko ezahlukeneyo ngamanye amaxesha abeka umfanekiso wehagu kwizikrweqe zawo njengekhubalo lokhuselo nokomelela.
Xa ihagu ingena ebomini bakho, iyakugcwaliswa ngentshukumo ekhawulezayo, eyaziwayo. Ihagu ikunika uzimiselo lwemozulu nakweyiphi na imeko ngaphandle kokuwela eludakeni. Xa ungaqinisekanga malunga nelungelo, eyona nto ungayenza- kukuthemba ihagu ukuba ikukhokele.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Ihagu yoMoya wezilwanyana .
Isimboli yemivundla kunye nentsingiselo yahluka kakhulu kwinkcubeko nakwinkcubeko. AmaTshayina ahlonela uMoya woMvundla njengesidalwa sethamsanqa esilungelelaniswe namandla achumileyo, anenyanga. Kwinkwenkwezi yaseTshayina abantu abazalwe ngonyaka woMvundla kuthiwa banobuchule kwaye banengqiqo.
Umvundla njengesiKhokelo seZilwanyana ngandlela thile. Umvundla ubiza ixesha lokulumkisa. Nangona kunjalo sukuyivelisa uloyiko lwakho kangangokuba utsala ukungakhathali. Ukuthintela akufuneki ukuba kungqengqiswe kuthuswa, kunokuba ube nembeko kwizilwanyana ezinokubakho kwaye uphephe loo ndawo.
Xa usebenza kunye neyeza lomvundla lixesha lokufumanisa ukuba ngubani kwaye yintoni onokumthemba ngokwenyani, kubandakanya nawe. Beka phantsi unxunguphalo kwaye uphinde ulungise iimeko kunye nabantu ababonakala ngathi bayadelela okanye bayaphazamisa. Njengomvundla, ungaphuma endleleni kwaye ufumane indlela entsha. Umvundla uphinde ucele umngeni kuthi ukuba sisuke kwiipateni ezindala kunye nemikhwa engasasebenziyo kwimimoya yethu. Lo ayingomsebenzi olula njengoko sihlala sikhula kwaye sisebenza kwi-reflex. Nangona kunjalo ukuze ukhule, ukushiya okudlulileyo ngasemva akukho nto kodwa kubalulekile.
Isilwanyana soMvundla soMoya sihlala sizisa umsila omncinci kumsila wakhe. Unokufumana uthando olutsha, ubone uphuculo lwezezimali okanye uzive uphile ngakumbi emzimbeni nasengqondweni. Ngokomoya uMvundla uphinde unxibelelanise nemimoya yakho yengqondo. Thembela kwi-intuition yakho, gxila kwingqondo yakho kwaye uhlale uthe cwaka ukumamela ilizwi lobuThixo obuPhezulu.
capricorn indoda ethandana nomhlaza womfazi
Kwindalo uMvundla ubonakala phakathi kweeyure xa kusisa nangokuhlwa. Kananjalo inobuhlobo nemimoya yendalo kunye nentsomi. Xa usebenza iyeza loMvundla lawo aphakathi kwamaxesha anika amandla amakhulu kwaye avule iNdlela kwezinye iindawo.
Umvundla awuthandi ukudibana okanye ukuvalelwa ekoneni. Abantu abazalwe noMvundla njenge totem bahamba ngokukhawuleza kwaye bahlala ngokungalindelekanga ebomini. Zizenzekelayo, zixhumaxhuma kumathuba ngaphambi kokuba ziphele.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Umvundla wezilwanyana .
Ibhokhwe kunye neRam Animal Animal
Enye yeentsingiselo ezihambelanayo kunye nesimboli yeRam Spirit yezilwanyana kwihlabathi liphela yile yokuzimisela okuluhlaza. Iinkunzi zeegusha kunye neebhokhwe zombini zityhutyha iindlela eziyingozi ngempumelelo apho abanye oomatiloshe abanobuchule banokukhubeka bawe. Xa uRam engena ebomini bakho izakhono zakho zobunkokeli zithatha inyathelo elikhulu lokuqhubela phambili njengomoya wakho odlamkileyo.
Abantu abaneRam Totem banokuphantse babe neenkani njengoBull kwaye ngesizathu esihle. Iyeza le-Ram lifuna ukomelela, ukungoyiki kunye nengcaciso ecacileyo yengqondo yokutsiba kumathuba. URam ubonakala ngathi akaze aphelelwe sisakhono.
URam ubonakala kwi-Chinese Astrology apho ubudlelwane bakhe nokuzingisa kuyaqhubeka. URam uhlala ene-mission kodwa iza nobuntununtunu, amandla kunye nesibindi esikhuthaza wonke umntu omngqongileyo. I-Ram, yesidingo, inempilo elungileyo kunye namandla aqinisekileyo ngobuninzi. Abantu beRam baqhuba kwaye banxanelwe ubomi bokuphila obuphawuleka.
Ngamandla eRam Spirit Animalzinto ezenza ukuba athandwe ngabantu abahlukeneyo bakaThixo kubandakanya uApollo, uZeyus noHermes. Kwimeko zonqulo iRam ihlala inxulumene nolawulo lukaThixo kunye nokuqiniseka. Emva kwayo yonke loo nto, umntu akanakunyusa intandokazi yeOlimpus ngaphandle kokuhamba kakuhle!
Ibhokhwe kunye neRam bezihlala zisekhaya kwaye zisetyenziswa njengomthombo wokutya kunye nempahla. Oku kunika lo Moya weSilwanyana uphawu olongezelelekileyo lokubonelela kunye nozinzo oluqhubekayo ekhayeni okanye kwishishini. Xa usebenza ngamandla eRam, yenza isiseko esiqinileyo sokomoya kuqala emva koko uye phambili. Ngelixa ibhokhwe ihamba ngokulula kumanqwanqwa amatye, nayiphi na iprojekthi efanele ukulandela ifuna ilitye lembombo eliqinileyo.
Ukuba ufuna iRam njengesilwanyana esinamandla, uya kukukhokela kwimicimbi yendalo yakho ongakhange uyivavanye ngokwenyani. Olu hambo lukhokelela kweyona nto inzima. Endleleni uRam akashiyi naliphi na icala lomlinganiso womzimba-wengqondo kuba zonke ezi zinto zintathu zibangela ukuqonda kwakho. Landela iRam kwaye uveze ubuchule kunye nengcinga yonke imihla.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Ibhokhwe kunye neRam Animal Animal .
Rooster uMoya wezilwanyana
Umqhagi othembekileyo usilumkisa ngesifingo, esenza intsingiselo yawo engumqondiso ephambili yohlaziyo, uvuko kunye nokulinda. U-Rooster Spirit uyakuthanda ukugungqa iintsiba zawo zomsila - ke sukulindela ukuba abe neentloni xa ebonisa ebomini bakho. I-Rooster njengesilwanyana somoya nayo ithwala amandla elanga, ukuzingca kunye nokuziphatha ngokwesini kwizibhengezo zakhe ezifike ngexesha.
Umqhagi osoloko evutha ngumsindo uyathanda ukukhala, onokuthi azibone enekratshi, kodwa kuQhude yindlela nje Yakhe yokuzibeka kude neenkukhu. Abo bane-Rooster Totems ngabantu abahlukileyo kakhulu abangakhathali ukubonisa ubuchule babo kunye nobukrelekrele kwabanye. Igama 'iintloni' alikho kwisigama sikaRooster, kodwa oko akuthethi ukuphosa isilumkiso emoyeni. Ukuba kukho nantoni na, uQhagi ulindile malunga nokuba nini, phi kwaye njani ukuba bazifaka njani kwiimeko ezahlukeneyo. Abantu bomqhagi nabo banoburharha, intshisakalo kunye nethemba elosulelayo elibenza badume kakhulu phantse kuyo nayiphi na indawo yokuhlala okanye kwimisebenzi yeqela.
Iyeza lomqhagi lisebenza ngokusondeleyo kunye nemimoya yee-Ancestors nayo. Esi sikhokelo siza kuwe sivela kumntu omthandayo ukukhalela malunga nengozi engabonakaliyo. Lo mbutho uvela kwizithethe zobugqi beCelt. Ngeli xesha amaGrike asixelela ukuba u-Rooster Spirit uzisa uloyiso kanye ngelizwi lakhe elibonisa ukuba ilanga linqoba ubumnyama. Abanye boThixo abadibene neRocker baquka uApollo onamandla (isithixo selanga) kunye noZeus (onobaba bonke).
I-Chinese Zodiac ifaka iqhude njengophawu lokuziphatha okuhle kunye nokunyaniseka. IYang, okanye amandla angamadoda ale ntaka azisa ithamsanqa, ukuzinikela kunye nokukhuseleka. Zonke ezi ziimpawu ezintle ekufuneka uzifune kuMqhagi njengezilwanyana eziMandla. IJapan nayo inemibono efanayo yokuncoma okanye uMqhagi kuba esi sidalwa sinika umnxeba kwimithandazo yakusasa. Njengesikhokelo somoya oku kuguqulela njengesikhumbuzo sokuphila ubomi bethu ngomthandazo, sivuma isikhokelo soMoya oMkhulu kubomi bethu bemihla ngemihla.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Rooster uMoya wezilwanyana .
Inyoka yoMoya wezilwanyana
Ukuba inyoka iqala ukubonakala ebomini bakho, kuyindalo ukuba uzibuze malunga nesi sikhokelo somoya nentsingiselo kunye nophawu. Amandla awomeleleyo kunyango lwenyoka kukuchuma kunye notshintsho. Unokufumana yonke indlela yokujonga kunye nokuphila ngendlela ephawulekayo.
Inyoka njengesilwanyana esinamandla isikhumbuza ukuba siphile ngokupheleleyo ngalo mzuzu. Ukuba uhlala ujonge ngasemva, ayinakwenzeka inkqubela phambili. Abo banethemba lokukhulelwa abantwana baya kuba benza kakuhle ukwamkela ubuni babo ngendlela esempilweni, yokondla ngeNyoka yezeNyanga njengeqabane. Yonwabela umzimba wakho kunye nobungcwele bokuthanda kwakho.
Iinyoka zityhala ulusu lwazo kwindalo ukuze zikhule. Kananjalo, i-Snake Totem iquka yonke imijikelo yobomi bethu ukusuka ekuzalweni kuye ekufeni kunye nawo wonke umzuzu onentsingiselo phakathi. Nika ingqalelo kuyo yonke le nkqubo. Into inokuphela, kodwa into entsha iqala emva koko ebhetele. Inyoka ikukhokela kwiinkqubo ezintle.
Abo bantu bazalwe nge-Snake Totem bakwimeko yokutshintsha rhoqo. Olu phawu luguqukayo luza kuluncedo xa ubomi buphosa umngxunya osembizeni apha endleleni. Inyoka abantu baziva izinto ngokunzulu kwaye bathambekele ekugcineni unyawo olunye emhlabeni nokuba kunjani. Inyoka Totem ikwanomdla kakhulu kwaye isithethi esimnandi.
Sebenzisa isimboli kunye nentsingiselo yeNyoka njengesilwanyana esinamandla xa ufuna ulwazi. Inyoka iya kukuxwayisa ngengxaki, kwaye ube lihlakani xa uzama ukukhulisa amandla akho obuchwephesha. Xa uhamba nenyoka ulungele utshintsho oza kuza kuwe ngqo. Musa ukoyika. Yima yomelele kwaye wazi ukuba emva kwesaqhwithi kukho into entle kwelinye icala elinde nje wena ukuba uvuthulule ulusu lwakho oludala. Qaphela kwakhona ukuba iyeza leNyoka linamandla kakhulu kuBasebenzi bokuKhanya abaqhuba ubugcisa bokuphilisa. Kungenxa yesi sizathu le nto inyoka yaba yinxalenye yeCaduceus, emele ukuhlaziywa.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Inyoka yoMoya wezilwanyana >.
Ukuba uMoya weTiger ungene ebomini bakho, unokuzibuza ngentsingiselo kunye nomfuziselo wale mandla azidlayo, amahle. Eminye yemibutho eqhelekileyo yeTiger ibandakanya ukomelela, isibindi kunye nokuziphatha. I-Tiger ifika kwabo ixesha labo lifikile ukuzalisekisa ubunyani bokwenyani kunye nokupolisha iimpawu kunye neempawu zakho de kube kukhanye ngokwenene.
NjengoMoya wezilwanyana uTiger uthi: musa ukuyeka amaphupha akho, kungcono ujonge ukubona indlela yokwenza inyani. I-Akin kulowo ufuna ukulungela ukuthatha ukholo, I-Tiger icela umngeni kuwe. Yamkela amandla akho okwenyani ngokumba usembindini wamandla akho.
Abo bazalwe ngeTiger Totem babonisa amandla, isibindi kunye nokuzimisela okungagungqiyo ukubona izinto. Xa ujongene nodonga olungumzekeliso nkqu neTiger-by-the-tail nokuba ifumana indlela yokuyijikeleza okanye imithombo iphelela ngaphaya. Amahlosi aziva izinto ngokunzulu kodwa ayayazi indlela yokulawula ezo mvakalelo kwiimeko ezibuthathaka. Isilumkiso kuphela kubantu beTiger lutyekelo lokuba ndlongondlongo ngaphandle xa ucatshukiswa yimeko okanye ziimvakalelo ongaziqondiyo.
Tsalela umnxeba kwiTiger njengezilwanyana eziMandla xa uziva uzithemba. I-Tiger nayo iyunithi yenkxaso enkulu xa ulahlekelwe yi 'joui de vivre' yakho okanye ukuthanda (nokuba kungokwenyama okanye kwengqondo). I-Tiger isitshela ukuba ubulili bethu kunye nokuziphatha komzimba kubalulekile kulonwabo kunye nokwaneliseka. Isitshixo kukufumana eyona ndlela yokubonisa kwaye uzive ukhululekile kwimivimbo yakho.
Xa umoya wezilwanyana weTiger usebenze uhlala ubonakalisa ixesha apho yonke into ebomini bakho ithatha ukujika okungalindelekanga kunye nokujika. Ubomi buhamba ngokukhawuleza kwaye ukucwangcisa kubonakala ngathi akunakwenzeka. Musa ukutsiba ekwenzeni ngokungxama okanye izigqibo, kodwa musa ukuzilazila nako. Hlala ulinde ngomonde nangokuzingisileyo de kufike ixesha lokukhulula iTiger ngokuzithemba.
KwiMpuma Ekude iTiger inemibutho eyahlukeneyo kubandakanya ukuhlala noThixo wobutyebi. Amahlosi akhusela imimoya yabafileyo kwaye anika uxolo kwimiphefumlo engonwabanga.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga Tiger Spirit Animal .
UFudo loMoya wezilwanyana
UMoya woFudo uphethe umhlaba emqolo, ngokuthe chu kodwa ngokuqinisekileyo kumdaniso wawo noMhlaba. Ukuhamba kukaFudo kuyinika isimboli kunye nentsingiselo yokuzimisela. Ngelixa usemhlabeni, uFudo uyagungqa ecaleni ngokungathi akakhawulezi kwaye anelisekile. Emanzini, nangona kunjalo uFudo luba ngaphezulu kakhulu kunokuba kubonakala. Njengomntu womhlaba nolwandle, uTyhalar Animal Animal wakha iibhlorho ngezitena zoxolo- engqondweni nasemphefumlweni, kananjalo noMama woMhlaba.
Isikhokelo soFudo sisifundisa ukuba iNdlela esiyithathayo imicimbi ngendlela esihamba ngayo. Ukuhlala uzinzile, ugxile, uyayazi indawo yethu kweli lizwe konke kukhokelela ekuqondeni ngakumbi iinyaniso ezazifunwa ngabantu bamandulo.
Xa ufudo lungena ebomini bethu lixesha lotshintsho. Ukuba uqhele ukuhlala kumgaqo okhawulezayo, beka phantsi ikofu kwaye uthathe iti. Kufuneka uphefumle.
Kulabo abane-Turtle Totem akukho tshintsho luza ngokukhawuleza. Kubekelwe bucala ngokucingisisiweyo kumanqanaba ngamanqanaba ajolise kwindaleko yokomoya. Kuba unekhaya lakho emqolo, abantu beFudo bathambekele ekubhaduleni kodwa bazive bekhululekile ngokupheleleyo nokuba ubomi busisa phi.
Njengesilwanyana esinamandla, tsalela amandla oFudo kwezi projekthi zexesha elide onokuthi uzincame. Iyeza lofudo livumela ukuqwalaselwa ngononophelo kunye nokuphononongwa endaweni yokungxamela ukugqitywa. Iziphumo ezihlala ixesha elide aziveli ngokungxama. Ngapha koko, 'ukungxama kwenza iQatha' kunokuba yimantra yoFudo.
AmaMelika aseMelika ahlonipha uFudo njengomenzi woxolo kunye nokubonakaliswa kwamaGunya obuNina kwindalo iphela. Ufudo aluhlali kwingxabano okanye umsindo. Ufudu lobulumko luthi, yehlisa isantya kwaye uwaqwalasele kakuhle amagama akho. Lindela ude ube nentloko ecacileyo ngaphambi kokuzama ukulungisa izinto. Amanye amadabi awenzelwanga ukuba alwe, kodwa yenza njengesifundo. Sebenzisa iqokobhe loFudo lwakho kwaye ufune ukuzola.
Ndwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com, kwaye ufunde ngakumbi malunga UFudo loMoya wezilwanyana .
umhlaza indoda kunye aries mfazi ubuhlobo
Indoda ye-aquarius kunye ne-libra yomfazi ngesondo
9 kunye no-9 ukuhambelana kwinombolo
Umzobo weplanethi yesixokelelwano selanga